Ho hampahafantarana amin’ny alalan'ny City Guide Antananarivo - Madagascar Informations
Economique Sociale & Culturelle
22 juin 2017 28 juillet 2017 Gasikara Aucun commentaire
Vokatra vaovao novokariny Mad’Activité production ny City Guide.
Mbola betsaka ireo vahiny no tsy mahafantatra An’Antananarivo hany ka zary lasa toeram-pandaovan’ireo vahiny fotsiny ihany. Noho ny tsy fahampiany fampahafantarana ny Renivohitra no antony nanaovana sy namoahana ity boky .
Ho avoaka isakin’ny 1 volana sy tapany ary ho zaraina maimaim-poana ka isany toerana ahitana azy ny eny anivon’ireo Hotely lehibe manerana ny Renivohitra ireo toera-pisakafoanana sy Boutique isan-karazany ,ireo ivon-toeran-kolontsaina ,ary ireo sampan-draharaha toy ny eo anivony EDBM , CCIA ary ny CCIFM. Tsy ho ela dia ho aparitaka manerana ny faritany ity boky ity ankoatra ny handefasana azy atsy amin’ny nosy la Reunion sy ny nosy Maurice.
Saika ho hita ato anatin’ity boky ity avokoa ireo tolok’hevitra rehetra ahafahana mahafantatra misimisy kokoa an’Antananarivo toy ny annuaires ,ny saritanin’Antananarivo ,ireo fitsangatsanganana maro isan-karazany ,sy ireo maro hafa.
← Ho enjehina ireo misandoka andraikitra
Tsy ampy ireo mpianatra mpitsabo eny Akatso indemnité de stage 1200Ar →